यू–१९ एसिया कप: नेपाल सेमिफाइनल पुग्ला ? यस्तो छ समिकरण - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
यू–१९ एसिया कप: नेपाल सेमिफाइनल पुग्ला ? यस्तो छ समिकरण
नेपाल सेमिफाइनल पुगेमा भारत वा बंगलादेशमध्ये एक टिम समूह चरणबाटै बाहिरनेछ। समूह ‘ए’ मा भारत, नेपाल र बंगलादेशले समान २–२ अंक जोडेका छन्। नेपाल र भारतले खेलेका २ मध्ये १ खेलमा जित र १ खेलमा हार बेहोरेका छन्। बंगलादेशले भने १ खेल मात्र खेलेको छ। बंगलादेशले पहिलो खेलमा नेपाललाई २ विकेटले हराएको थियो।
बंगलादेशले सोमबार मलेसियालाई पराजित गरे मंगलबार हुने समूह चरणका खेलहरु रोमाञ्चक तथा निर्णायक हुनेछन्। मंगलबार नेपाल र मलेसिया तथा भारत र बंगलादेशबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपाल र बंगलादेश विजयी भए दुवै टिम सेमिफाइनलमा पुग्नेछन् भने भारत बाहिरनेछ। भारत विजयी भएमा तीन टिमको समान ४–४ अंक हुनेछ। राम्रो रनरेट हुनेमध्ये २ टिम सेमिफाइनल पुग्नेछन्।